Panama: Mpanao gazety voaroaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2011 18:29 GMT
Ny asabotsy faha 26 Febroary dia notazonina am-ponja ilay mpanao gazety Espaniola Francisco Gomez Nadal sy ny vadiny Pilar Chato ary taorian'izay dia niverina tamin'ny nahim-pony tany Espana raha araka ny voalazan'ny gazety La Prensa [es]:
Nanao sonia an-tsitrapo antontan-taratasy manaporofo ny fanekena nataony hiverina any Espana ilay mpanao gazety Paco Gómez Nadal, tao amin'ny ‘National Immigration Service (SNM)’ (foibe nasionaly miandraikitra ny fifindra-monina).
Notazomina am-ponja ny asabotsy farany teo, izany hoe ny 26 febroary, i Gómez Nadal sy Pilar Chato vadiny, izay mpanao gazety ihany koa, raha nitatitra vaovao mikasika ilay hetsi-panoherana nataon'ny mponina mikasika ilay fehezan-dalàna vaovao mifehy ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, tao amin'ny Plaza 5 de Mayo.
Raha araky ny voalazan'ny polisy nasionaly (PN) – dia nosamborina avokoa izy roa – nohon'ny “fanakorontanana ny filaminam-bahoaka” sy ny “famporisihana ireo mponina mpanao hetsi-panoherana hibahan-dàlana ho fanoherana ny fampiharana ilay fehezan-dalàna mikasika ny harena an-kibon'ny tany”.
Tsy nanaiky io fepetra io ny sasany tamin'ny Panameana, raha nankasitraka izany kosa ny sasany. Naneho ny tsy fankasitrahany io fepetra io i Arethusa tao anatin'ny bilaoginy Bla, bla, bla de una panameña [es], araka ny fahitany azy dia faneriterena ny fahalalahana haneho hevitra izy io:
Eny, ahitana fitoviana ao Panama, fa fitoviana eo amin'ny faneriterena. Tsy vitan'ny hoe nosamborintsika fotsiny ny mpanao gazetintsika fa noroahantsika ihany koa ny mpanao gazety avy any ivelany [es] rehefa tsy mankasitraka ny didy jadona ataon'ny filohantsika Ricardo Martinelli. Talohan'ny androahana azy, dia tokony nantsoin'izy ireo izy hanolotra seminera ho an'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpiambina ao Panama, seminera miompana indrindra amin'ny Zon'Olombelona. Izany mihitsy, satria mihevi-tena ho ao anatin'ny HIGHLANDER ry zareo [Avy amin'ny mpamoaka: Toa tantara an-tsary ity highlander ity raha tsy diso aho] , soa aza fa nanana ilay fialan-tsiny tsotra kely izy ireo nilaza fa “fanatanterahana ny asa aman'andraikiny izany”, izany no ahafahan'izy ireo mampiditra olona any am-ponja sy mively ny hafa amin'ny kibay rehefa maneho fanoherana izy ireny.
Nanan-kambara mikasika io lohahevitra io ihany koa ny fikambanan'ny mpampianatra avy ao Veraguas tao anatin'ny bilaogy Estudio1panama [es] ka nilaza izy ireo fa i Paco dia ” Panameana tahaka ny faha 9 Janoary 1964, ‘Andron'ireo Maritiora’ “:
Araka ny efa nolazainay teo aloha, i Paco Gomez Nadal, dia Panameana tahaka ny tamin'ny 9 Janoary 1964. Indray mandeha, nisy olona nanao vazivazy zary tenany, raha niresaka momba an'io tolona ho an'ny zon'olombelona io, fa hoe nilofosany mafy ny famerenana izany, ny dadaben'ny dadabeny tany aloha, ireo conquistadores, no naka izany zo izany tamin'ny vahoakan'i Abia Yala izy ireo, ary nasehon'i Paco ny tanjany sy ny filofosany teo amin'ny tolona ho an'ny fahalalahana ara-demokratika. Mankasitraka azy noho izany izahay ao amin'ny fikambanan'ny mpampianatra Panameana.
Manaiky i Jairo A. Rojas Garzón (@ombrepajaro) fa na teo aza ny zavatra nolazain'ny governemanta, ny tena antony nandroahana an'ilay mpanao gazety dia ny halalin'ny votoatin-javatra nosoratany tao amin'ny lahatsorany:
“Nanakorontana ny tombontsoan'ny governemanta Panameana i Paco Gómez Nadal sy Pilar Chato noho izy ireo niombon-kevitra tamin'ny tolon'ny mponina zanatany”.
Na izany aza, dia hita fa mankasitraka an'io fandroahana mpanao gazety io ireo Panameana sasany, toa an'i Elias Manopla (@eliasman), rehefa nahatsapa izy ireo fa maneho fitsabahana amin'ny raharaham-pirenena Panameana ny voalazan'ny lahatsorany sy ny fandraisan'izy ireo anjara mavitrika tamin'ilay resaka zon'ny mponina zanatany:
Veloma ianao Andriamatoa Paco Gomez Nadal, mandehana ary mitadiava olona hafa azo elingelenina… Nefa aza dia manantena loatra an'izany! […]
Mametraka ny tenany ho olona tsy mino ny hevitry ny hoe fampiivoarana i Gomez Nadal ao anaty bilaogy Otramérica ary maniry ny hiaraha-miasa amin'ny mponina zanatany sy ireo vondrona tantsaha .
Mpanao gazety aho ary ny karapanondroko dia manambara fa teraka tao Murcia aho tamin'ny taona 1971. Taona vitsivitsy aty aoriana izao, mahaleo tena eo amin'ny fampielezam-baovao aho (izany hoe, tsy mandray vola ), manome soso-kevitra ny gazety aminà firenena maro samihafa sy ny aty amin'ny faritra aho (satria izy ireo no miantoka ahy) ary miara-miasa amin'ny tantsaha sy ireo vondrom-piaraha-monina zanatany aho amin'ny fanakanan-dry zareo io tetikasa lehibe io (satria tsy mino loatra ilay eritreritra fampivoarana aho).
Io fandroahana io dia nanohina ireo mponina zanatany izay nanaiky hifampiraharaha ny amin'ny fepetra hoe ho avotsotra daholo ireo notazonina nandritry ny hetsi-panoherana. Na teo aza ny fanomezan-toky nataon'ny filoha Ricardo Martinelli hanafoana ilay fanavaozana ny fehezan-dalàna faha 8 mifehy ny harena an-kibon'ny tany, dia nampahatsiahy anay ny Panameana sasany toa an'i José X. Martínez fa tsy mbola voavaha ny olan'ilay mpanao gazety noroahana (@JXMARTINEZ14) :
Nofoanan'izy ireo ilay lalàna! Fa tsy azontsika adinoina mihitsy i PACO GOMEZ NADAL! MBOLA MITOHY NY TOLONA! HO TODY HATRAMIN'NY FARANY ITY TOLONA ITY.